Imandarmedia.com.np: कम्युनिष्ट पार्टीसँग किन यस्तो 'लुकाछिपीको' खेल खेल्दै छ प्रहरी ? हेर्नुहोस् यस्ता ४ तथ्य
Big News, News, Newspaper » कम्युनिष्ट पार्टीसँग किन यस्तो 'लुकाछिपीको' खेल खेल्दै छ प्रहरी ? हेर्नुहोस् यस्ता ४ तथ्य
कम्युनिष्ट पार्टीसँग किन यस्तो 'लुकाछिपीको' खेल खेल्दै छ प्रहरी ? हेर्नुहोस् यस्ता ४ तथ्य
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् ।
नीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई सरकारले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने आशंकामा जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्न थालेको हो ।
नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भेषराजले देशभरबाट झन्डै दुई सयको हाराहारीमा नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्तालाई सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ का आधारमा हिरासतमा राखिएको छ ।
ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरौटी बुझाएकालाई समेत पुनः पक्राउ गर्ने, एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा सारेर फेरि मुद्दा लगाउने गरिएको नेकपाले आरोप लगाएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीले पक्राउको विरोध गरेका छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने, राजनीतिक आस्था राख्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन हुने गरी सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि धरपकड बढाएको मानवअधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
तथ्य ३ : धरौटी बुझाएर पनि छोडिएन
हामीले कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका रूपमा कसैलाई पक्राउ गरेका छैनौँ । जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा कायम तथा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने क्रममा विरोधी गतिविधि कसैले गर्न खोज्छ भने उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेको होला । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
Trending : Big News, News, Newspaper